Horudhac: Liverpool vs West Ham United… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ka dhacaya garoonka Anfield) – Gool FM
Haaruun October 31, 2020
(Liverpool) 31 Okt 2020. Kooxda xafidanaysa horyaalka Premier League ayaa doonaysa inay guul gaarto kulankeedii afaraad oo xifriir ah tartammada oo dhan, marka ay Reds soo dhoweynayso West Ham United kulanka caawa ka dhacaya garoonka Anfield.
Martigeliyeyaasha kulankan ayaa ku raaxaysanaya guul 2-0 ah oo ay ka soo gaareen FC Midtjylland todobaadkii la soo dhaafay tartankan Champions League.
West Ham ayaa dhankeeda kulankii ugu dambeeyey horyaalka waxa ay barbaro 1-1 la soo gashay kooxda Manchester City.
Taariikhda: Sabti 31 Okt 2020
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 08:30 Habeennimo xilliga geeska Afrika.
Liverpool waxaa ka maqan Fabinho dhibaato muruqa ah, sidaas darteed 19-sano jirka daafaca dhexe ee Rhys Williams ayaa laga yaabaa inuu ciyaaro kulankiisii ugu horreeyay ee Premier League.
Reds ayaa la socon doonta taam ahaanshaha Thiago Alcantara iyo Naby Keita, kuwaas oo ku dhow inay soo laabtaan, halka kulankaan laga yaabo inuu dhaqso u yimaado Joel Matip.
Michail Antonio ayaa ka maqan West Ham, laakiin tababare David Moyes uma maleynayo in dhaawaca muruqa ee ciyaaryahankan uu yahay mid aad u xun.
Weeraryahankan waxaa booskiisa buuxin kara Sebastien Haller ciyaarta ka dhacaysa garoonka Anfield.
Saxiixa maalinta kama dambaysta ah ay la soo wareegeen ee loo yaqaan ‘Said Benrahma’ ayaa sugaya inuu safto kulankiisii ugu horreeyay ee Hammers, isagoo aan ka qeyb qaadanin kulankii Manchester City ee isbuucii hore sababo la xiriira taam ahaansho la’aan ciyaarta ah.
>- Liverpool ayaa guuldarro la’aan ah siddeedii kulan ee Premier League ay ku wajaheen West Ham tan iyo markii ay guuldarro kala kulmeen labadii is-arag ee kal ciyaareedkii 2015-16, waxayna siddeedaas kulan ka haystaan lix guul iyo labo barbaro.
>- The Hammers ayaa 3-0 ku adkaatay kulankii ka dhacay garoonka Anfield bishii Agoosto ee sanadkii 2015-kii, laakiin waa guusha kaliya oo ay ka soo gaareen horyaalka 47 kulan oo ay booqdeen Reds.
>- Kooxda Tababare Jurgen Klopp ayaa guuleysatay 28 ka mid ah 29-kii kulan ee ugu ugu dambeeyey oo ay ciyaaraha sare ee horyaalka ku adkaadeen Anfield.
>- Haddii ay Reds guuldarro ka fogaato waxa ay barbareyn doontaa rikoorkii 63 kulan ahaa oo ay garoonkooda guuldarro la’aan ku ahaayeen.
>- Kaliya hal koox ayaa afarta heer ee kala duwan ee Waddanka Ingiriiska ku raaxaysatay guuldarro la’aantii ugu dheerayd kulamo xiriir ah garoonkeeda waana Chelsea oo 86 kulan oo horyaalka ah aan garoonkeeda lagu garaacin intii u dhexeysay 2004 ilaa 2008.
>- Sadio Mane ayaa qarka u saaran inuu safto kulankiisii 200-aad ee horyaalka Premier League.
>- Mane ayaa gool dhaliyey mid kasta oo ka mid ah afartiisii kulan ee ugu dambeeyey oo uu wajahay West Ham United, waxaana uu ka dhaliyey shan gool isagoo sameeyey saddex caawin lix kulan oo Premier League ay Liverpool ku wajahday Hammers.
>- Mohamed Salah ayaa dhaliyey lix gool, waxaana uu dhigay labo kale lixdiisii kulan ee ciyaaraha sare ee horyaalka uu ku wajahay West Ham United.
>- Hammers ayaa guuldarreysatay 21 ka mid ah 24-kii kulan ee ugu dambeeyey Premier league oo ay booqatay kooxda haysata horyaalka, guusha kaliya oo ay gaareen ayaana timid markii uu Jermain Defoe ugu shubay kooxda Manchester United sanadkii 2001.
>- West Ham United guuldarrada kaliya ee soo gaartay lixdii kulan ee ugu dambeeyey oo ay booqdeen kooxaha waa weyn ee Premier League, waxa ay ahayd bishii la soo dhaafay markii ay khasaaro 2-1 kala kuleen Arsenal.